Muuse Biixi oo Safar Dibadda ah u ambo baxay kadib Martiqaad loo fidiyay (Sawirro) | Allbanaadir.com
Home NEWS Muuse Biixi oo Safar Dibadda ah u ambo baxay kadib Martiqaad loo...
Muuse Biixi oo Safar Dibadda ah u ambo baxay kadib Martiqaad loo fidiyay (Sawirro)
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi iyo wefti uu hoggaaminayo, ayaa saaka safar shaqo ugu ambo baxay dalka Jamhuuriyadda Jabuuti, kaddib marti-qaad rasmi ah oo uu madaxweynuhu ka helay Madaxweynaha Jabuuti.
Safarka madaxweynaha iyo weftigiisa, ayaa qaadan doona muddo kooban, waxana muddada ay madaxweynaha iyo xubnaha weftigiisa ahi halkaas joogaan lagu lafo-guri doonaa arrimo la xidhiidha xoojinta xidhiidhka labada dhinac iyo danaha ka dhexeeya Somaliland iyo Jabuuti.
Safarkan Muuse Biixi ugu ambo baxay dalka Jabuuti ayaa imaanaya xili maalmo kahor safar maalmo qaatay ku tagay magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya kadib uu martiqaad rasmi ah uu ka helay Madaxweynaha dalkaasi
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa wada dadaalo badan uu ku doonayo in maamulkiisa lagu aqoonsado, hasa ahaatee waxaa wali heesta caqabo badan oo ku hor gudban in aqoonsi hesho Somaliland.
Previous articleDhac Nuuc cusub ah oo kusoo kordhay Muqdisho iyo Walaac laga muujiyay !!
Next articleMaxkamad kutaala Dalka Ingiriiska oo Xukun adag ku riday Muwaadin Soomaaliyeed